ထုတ်လုပ်သူများလမ်းညွှန် - ပေးသွင်းသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများလမ်းညွှန် - Alietc B2B
ပိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံအတွက် Chrome, Firefox, Opera သို့မဟုတ် Internet Explorer ကိုရန်သင့် browser ကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ။
ပေးသွင်း directory ကို
သငျသညျထုတ်လုပ်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းအတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းရှိမရှိ, သို့ဝင်ရောက် Alietc ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက် စီးပွားရေးအတွက်သာအကျိုးရှိသည် မင်းပဲလား ကုန်သွယ် ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကစားစရာအရုပ်, အဝတ်အစား or မီးဖိုချောင်သုံးသို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သည် အရိုင်း နှင့် ပိုစတာ, မှတဆင့် အထည် နှင့် ပလတ်စတစ်.
ထဲမှာ B2B စျေးကွက်, ပေးသွင်းသူများနှင့်မတူဘဲအတွက်အတွက်ထူးခြားတဲ့နယ်ပယ်ယူထားသော ထုတ်လုပ်သူ ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာဝယ်သောသူ၊ သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာရောင်းသောသူ၊ ပေးသွင်း နှစ်ခုလုံးကိုလုပ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပါက Alietc သည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်နှစ်ဆအသုံးဝင်သည်။
Alietc ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းလိုပါကရေရှည်အကျိုးစီးပွားနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုစတင်နိုင်မည့်စစ်မှန်သော ၀ ယ်သူများကိုသင်ကူညီလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်ဝယ်ယူရန်ကြိုးစားနေသည့်ထုတ်ကုန်များအတွက်အလားတူလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ B2B ပလက်ဖောင်း ဝယ်သူသို့မဟုတ်ရောင်းသူအနေဖြင့်သင်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုထိရောက်စွာနှင့်ထိရောက်စွာဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်သေချာစွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။
ထိုသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များ၌သင်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများနှင့်သင့်အားလမ်းညွှန်မှုနှင့်အကြံဥာဏ်များများစွာပေးလိမ့်မည်။ သင်ဟာအတွေ့အကြုံရှိအရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်လား၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ဟာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကမ္ဘာလောကသို့ရောက်ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ သင်နှင့်သင်သုံးစွဲတဲ့အချိန်အများစုကိုအသုံးချနိုင်ဖို့အသုံးဝင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့အတွက်“ ပေးသွင်းသူလမ်းညွှန်” ကိုဖတ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုမှာ Alietc.
ပထမ ဦး စွာ၊ ငါတို့တစ်ယောက်မှစာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည် အဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်များ
သင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့ Alietc, သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောစွဲမက်စရာပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်းဝင်များအတွက်သာသီးသန့်ရရှိနိုင်သောသင်၏ Alietc Profile ကိုဖန်တီးရန်အသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအသုံးပြုသူလမ်းညွှန်များနှင့်အတူသင်၏ပရိုဖိုင်းဖန်တီးမှုလမ်းညွှန်သည်သင်မြေပေါ်သို့ပြေး ဝင်၍ မလိုအပ်သောအချိန်ကိုဖြုန်းတီးရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ရောင်းရန်အတွက်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုစာရင်းပြုစုပါ။ သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုစာရင်းပြုစုသောအခါစျေးနှုန်းမပါဝင်ပါ။ စျေးနှုန်းကိုမပြရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာအပြောင်းအလဲများကို အခြေခံ၍ ညှိနှိုင်းနိုင်စွမ်းရှိခြင်းသည်ပိုမိုထိရောက်ပြီးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိစေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Volume နှင့် time-scale သည်ယူနစ်စျေးနှုန်းကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သော variable နှစ်ခုဖြစ်သဖြင့်တစ်ခုတည်းသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပေ။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်စာရင်းသွင်းထားသောကုန်ပစ္စည်းအားလုံးတွင်“ ဆက်သွယ်ရန်ထုတ်လုပ်သူ” အား ၀ ယ်သူများအသုံးပြုရန်တောင်းခံချက်ပါရှိသည်။ ကန ဦး အနေဖြင့်ထိုတောင်းဆိုမှုသည် Alietc ရှိကျွန်ုပ်တို့ထံလာပြီး ၀ ယ်သူ၏တရားဝင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အကဲဖြတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများနှင့်အတူသင်ဝယ်ယူသူနှင့်တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းနိုင်သည်။
ဝယ်သူတောင်းဆိုချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။ အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်များနှင့်မတူဘဲ Alietc သည် ၀ ယ်သူများအားကုန်ပစ္စည်းများအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုတင်ရန်အားပေးသည်။ သူတို့ကမည်သည့်ထုတ်ကုန်မည်မျှလိုအပ်သည်ကိုသင်ပြောပြလိမ့်မည်။ သင်ထို့နောက် 'လေလံ' နေရာချနိုင်သည်။ အဲဒါအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် အကယ်၍ ၀ ယ်သူသည်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစွန့်လွှတ်သည်ဟုသင်ခံစားရပါကအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားဖယ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် ၀ ယ်သူနှင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်မည်။
ကုန်ပစ္စည်း ၀ ယ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုတင်ပါ။ သင်ရှာဖွေနေသည့်ကုန်ပစ္စည်း (များ) ကိုထုတ်လုပ်သူများသို့မဟုတ်ပေးသွင်းသူများအားရှာဖွေရန်နှင့်“ ကုန်ပစ္စည်း ၀ ယ်ရန်တောင်းဆိုချက်” ကိုတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းထက်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုသုံးနိုင်သည်။
လေလံဆွဲပါ။ သင်သည် Alietc ပလက်ဖောင်းတွင်ရောင်းရန်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုလေလံဆွဲနိုင်သည်
ကုန်ပစ္စည်းတောင်းဆိုမှုတစ်ခုတင်သွင်းပါ။ သင်သည်မည်သည့်ထုတ်ကုန် (များ) ကိုသင်ဝယ်ယူနေသည်နှင့်၎င်းအတွက်ငွေပေးချေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည့်အရာများကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာထုတ်ပေးသည့်ကုန်ပစ္စည်းတောင်းဆိုချက်ကိုသင်တင်သွင်းနိုင်သည်။ သင်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်း (များ) ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ / ထုတ်လုပ်သူမဆို ရှာဖွေခြင်းသည်သင်၏ထုတ်ကုန်တောင်းဆိုချက်ကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ သင်ပေးလိုသောစျေးနှုန်းသည်၎င်းတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်ဆက်သွယ်မှုပြုလိမ့်မည်။
မည်သည့်ထုတ်လုပ်သူ / ပေးသွင်းသူနှင့်မဆိုသင်၏ကန ဦး ချဉ်းကပ်မှုသည် Alietc မှတဆင့်အမြဲတမ်းရောက်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သင်သည်စစ်မှန်သောစီးပွားရေးသို့မဟုတ်တစ် ဦး တစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပျော်ရွှင်သည်နှင့်သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုထုတ်လုပ်သူ / ကုန်ပစ္စည်းပေးသူထံသင်၏ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့်အတူပေးပို့ပြီးနောက်မှသင်အချင်းချင်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဤတွင် Alietc ၌ကျွန်ုပ်တို့စောစောစီးစီးလေ့လာခဲ့သည့်အရာတစ်ခုမှာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်များသောအားဖြင့်အကောင်းဆုံးသဘောတူညီမှုများရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်ပုံမှန်ပြန်အမိန့်များအတွက်သိသိသာသာအသံအတိုးအကျယ်သို့မဟုတ်အလားအလာဖြစ်စေရှိရာအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုနှင့်ပတ်သက်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်းအချက်များအများအပြားရှိပါတယ်။
သင်၏ပထမခြေလှမ်းမှာသင်ရောင်းရန်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများကိုစာရင်းပြုစုရန်နှင့်တတ်နိုင်သော၊ လိုလိုလားလားရှိသော ၀ ယ်သူများထံမှကမ်းလှမ်းချက်များကိုဖိတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုသတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းဖြင့်လည်းရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်၊ သင်ရောင်းရန်ရှိသည့်ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်ရှာဖွေနေသူများ၊ သို့မဟုတ်ယခင်ကထိုပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူသူများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အလားတူကုန်ပစ္စည်းများအားကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောဒေတာဘေ့စ်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်၎င်းတို့ရှာဖွေနေသည့်ကုန်ပစ္စည်း (မ်ား) ကိုသင်ရောင်းနိုင်သည့်ဈေးနှုန်းကိုပို့နိုင်သည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: သင်၏အသင်း ၀ င်မှုအဆင့်ပေါ် မူတည်၍ Alietc စျေးကွက်ကိုအသုံးပြုသူအားလုံးသည်ဤစျေးကွက်လည်ပတ်မှုနှင့်အပြည့်အ ၀ စိတ်ဓာတ်ရှိရန်သေချာစေရန်သင်သည်စာရင်းအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လေလံကြေးကိုသင်ပေးရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိ 'spam' နှင့်လေးနက်မှုမရှိသောအသုံးပြုသူများကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအသင်း ၀ င်အပိုင်းတွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည်။
Alietc - ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ထက်အများကြီးပိုများတယ်
Beijing ADSS Development Co. , Ltd.
ထုတ်ကုန်: သံဖြူသတ္တုစပ်အလွိုင်းပစ္စည်း၊ လူမီနီယမ်ကြေးအလွိုင်းပစ္စည်း၊ ကြေးချုံတွင်း၊ အခွံမာသီး၊ ကြေးတံစကိတ်၊ ကြေးဝါဆွန်းဘား၊
Beijing Aimylin Technology Co. , Ltd.
ထုတ်ကုန်: Metal Scrap Shearing Machine၊ Metal Scrap Baler၊ ပလတ်စတစ်နှင့်စက္ကူခြစ်စက်၊ Alligator ညှပ်စက်
Beijing Angdong International Trade Co. , Ltd.
Beijing Antaios Technology Co. , Ltd.
Beijing Beautemax နည်းပညာလီမိတက်
ထုတ်ကုန်: RC ကစားစရာများ၊ အားကစားကစားစရာကစားစရာများ၊ အသိဉာဏ်ရှိသောကစားစရာများ၊ Alloy / Metal ကစားစရာများ၊
Beijing Bomeitong Technology Co. , Ltd.
ထုတ်ကုန်: Depurador de Chainmail, limpiador de hierro ရန်ပုံငွေ, alhohadilla de fregado de Chainmail, Infusor de té, malla de alero de acero inoxidable
Beijing Chaoqun Weiye International Co. , Ltd.
ထုတ်ကုန်: crystal လက်မှုပညာ
Beijing Cheng Yi Chemical Co. , Ltd.
ထုတ်ကုန်: Prefab အိမ်
Beijing Chengkun ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
ထုတ်ကုန်: ဆေးဝါးအလယ်အလတ်, Fine ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, ဆိုးဆေးအလယ်အလတ်
Beijing Chengzhu အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်
ထုတ်ကုန်: MIM ထုတ်ကုန်များ၊ ခွဲစိတ်စက်များ၊
မူပိုင် 2020 © Alietc.com B2B Marketplace & directory ကို, All Rights Reserved ။ T & C - PP
My Account Reset